makar rashi 244 days ago
magorkhe1 244 days ago
Logankobaje 244 days ago
chicagoan 244 days ago
Fuchhey 243 days ago
Visitor from US is reading Buying A House in Kathmandu
Visitor is reading7parties now became 8
Visitor is reading Maoist Government Catch 22
Visitor from FR is reading Nepali youth wins Democracy Video Challenge
Visitor is reading Looking for QA training around Alexandria, VA
Visitor from SG is reading Looking for Room in San Francisco Bay Area
Visitor from SG is reading Any online Nepali tutors for kids while schools are closed?
[VIEWED 3001 TIMES]
Posted on 01-27-21 8:02 AM Reply [Subscribe]
मूजि ५ ६ वर्ष भयो स्टक किन बेच गरेको ,सधै लाटो हिसाबले किन बेच गरियो । ठिकै थियो तर चमत्कार केहि भएन । warren buffet बन्ने सपनामा उबेलाँ options trading मा लागेको झन्डै johney lever बनियो । अप्रिल २५ २०१५ नेपालाँ भुइचालो गाको ,मेरो भुइचालो चै अप्रिल २२ मै गयो, options trading मा 26k डुब्यो एक शटाँ । मूजि कमाईको हिसाबले5महिनाको स्यालरी थियो तर बचतको हिसाबले २ वर्षको पुंजी । मेरो saving खाताले 10K माथि खासै देख्दैन, देख्योकि लोदर लाग्छ । उबेला नि तेस्तै भयो,महिनौ या भनौ बर्सौ बाद 20 K माथि saving भाको थियो, options ले 2K मा झार्यो ।
त्यो बेला देखि मूजि options रिस्क लिन सकेको छैन , त्यो बेलाँ थोरै सोचेर धेरै लगानी गर्न्दा चुर्लुम्मै डुबियो, ऐले धेरै सोचेर थोरै लगानी गर्दा एक्कै चोटी माथि पुगियो । मेरो एकजना भेले साथी छ ( options pro ), उबेलाँ मलाई डुबाउने नि उही ऐले अनेपेछित खुसि दिने नि उही । २ ४ दिन देखि म त ज्यादै खुसि छु, त्यो भेलेले त ठुलै सफलता हात पार्यो मेरो तुलनामा, जाठोले अब १२ वर्ष कामै नगरे नि हुन्छ मेरो बिचारां।
उता reddit तिर एउटा डे - trader ले ५० के बाटै 11 million बनाएछ १ महिना मा GME बाट । येसरी अरु संग तुलना गर्ने हो भने त आफ्नो खुसि गौर्ण छ तैपनि मूजि कोहि संग तुलना नगरी हेर्ने हो भने आफ्नो खुसि पनि चानचुने होइन । मूजि2वर्ष काम गरे बराबरको भन्दा बढी मुनाफा आको छ एक शटाँ। हिम्मत हुनेको लागि चै गज्जब हो यो options trading । आफु परियो गोबर गरेश एउटा असफलताले म मूजि ५ वर्ष भागे options call बाट, येही डरले आज म त्यो भेले भन्दा १५ वर्ष पछाडी छु । तर मुजी केहि छैन सबैको आफ्नै आफ्नै गति हुन्छ । त्यो भेले भन्दा ३० ओटी बढी तरुनीको गाला मैले चिमोटेको छु । ( मन बुझाउने बाटो )
साझां नि एक हप्ता कोइ संग कहाँ सुनी नगर्ने सोचेको छु आजो चौथो दिन ।
Posted on 01-27-21 8:21 AM [Snapshot: 31] Reply [Subscribe]
लौ बधाई छ लोगन को बाजे ! GME ले धेरै को भाग्य बदलियोदियो ! अरु कुरा तेस्तै हो लेखाइ चाइ हाम्रो अन्डर 'बियर' ब्रो जस्तो लाग्यो :D
Posted on 01-27-21 11:01 AM [Snapshot: 182] Reply [Subscribe]
हजुरको बुद्दि देखा सिखी गर्ने मात्रै देखिन्छ, लागानी देखि साझामा राख्ने नाम पनि देखासिखी नै छ | बिल्लियन कम्बिनेशन मा साझाको एउटा नाम बाट बाजे , बाउ विनाजु थपेर नया खाता खोलि बस्नेले कति माथि पुग्नु होला ?
Posted on 01-27-21 1:53 PM [Snapshot: 338] Reply [Subscribe]
गोर्खे ब्रो , कित आफु लिडर बन्न सक्नु पर्छ कित अरु लाई लिडर मानेर उनीहरुको देखा सिकी गर्ने हो , म चै आफु केहि गर्न नसक्ने भएर अरुको देखा सिकी गरेर अघि बढी राखेको छु । लोगने ब्रो को "साझा क्रेज " देखेर उसकै जस्तो नाम राखेको आज उसको भन्दा मेरो बढी चर्चा छ साझां ।
मलाई पेंनी स्टकको तेती जानकारी छैन अस्ति मूजि नासे दाई को देखा सिकी गरेर SOS १ ९४ मा किनेको आज २ ६८ मा बेचेर ठाउँ को ठाउँ लगभग १२०० नाफा खाए । एउटा भेले भैयाको देखा सिकी गरेर GME मा सबसे बढी नाफा मारियो ।
हेर्नुस सर दुस्मनी गर्दा पनि अलि अक्कल वाला संग गर्नु पर्ने रैछ, धेरै फाइदा हुदो रैछ । अब मूजि एउटा options trading गर्ने दुस्मन खोजि रा छु साझा तेस्कोनि केहि देखा सिकी गरेरे आघि बढ्नु छ । म मूजि अनपढ पर्खाले अमेरिकन, मलाई यो मूजि मार्केट research , analysis गर्न अल्छि लाग्छ । यी मूजि नासे , फासे , ब्रोहरु छन् , यिनीहरु research गर्छन , यहाँ पोस्ट गर्छन, म यिनीहरुको move अर्को एउटा भेले बाट verify गर्छु अनि आफ्नो अलि अलि लगानी गर्छु ।
तपाइको " डर लाग्न थालेको छु " बाट नि ज्यादै प्रभावित छि ।
अनि "नाम haijack ' गर्यो भन्नेमा तपाइको ज्यादै दूखेसो सुने, येस्ता सान्तिनो कुरामा चित्त नदुखाउनुस , फराकिलो मन गर्नुस । जसको नाम छ उसकै चोरी हुने हो , हामी जस्ताको त कसले चोर्छ र !
Posted on 01-27-21 5:24 PM [Snapshot: 477] Reply [Subscribe]
Malai khusi lagyo, dui barsa ko talab barabar kamai bhayechha. Malai chahin testo idea thiyo a.Dui char mahina Pahilenai kineko GME stock bechera 20 k faida. Mero lagi chahin yo record break nai ho tesaile khusi lageko chha. Sabaiko ramro hos
Posted on 01-27-21 6:39 PM [Snapshot: 565] Reply [Subscribe]
Nas bro I made good profit from express some one post couples days ago in Twitter and same day I bought 2k . I sold little early but I am happy. Toady is my day off I Watched GAME ,Koss and express stocks. I feel like is that real money. ❤️Nas bro aba kun stock fly huncha hola hajur ko bichar ma? Thank you